Gaari Tuulo Qaybaha soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda - Xiangfu
Guriga > Alaabada > Fiiq Qaabaynta > Gaari Tuulo Qaybaha
Qeybta Gawaarida Gawaarida ayaa ah shey kasocda dhamaan qeybta gaariga isla markaana u adeegaya gaariga. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah Qeybaha Gaarka ah. Markii heerarka nololeed ee dadku ay sii kordhayaan, dadku waxay cunaan gawaari aad u tiro badan. Suuqan loogu talagalay qaybaha otomaatiga.
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa adeeg bixiye xirfadleyaal ah oo loo yaqaan 'Auto Spare Part' ee Shiinaha, dhammaan noocyada wax soo saarka iyo iibka, tilmaamo kaladuwan, tayo sare iyo qiimo hooseeya, moodallo dhameystiran, ku-talogal ah, iibinta tooska warshad!
Qaybta Gawaarida Gawaarida oo si weyn looga isticmaalo isgaarsiinta, qalabka saxda ah, qalabka caafimaadka, tareenada xawaaraha sare, gawaarida, duulista iyo warshadaha kale.
Qalabka gaarka loo leeyahay, gaarigu wuxuu ka kooban yahay afar qaybood, kuwaas oo kala ah, matoor, qalabka loo yaqaan 'chassis', jirka iyo qalabka korontada, afartaan qaybood waa gole kasta oo ka kooban, qeyb walbana ka kooban, iyo hal qeyb oo isku dhafan oo waa la isku soo aruurinayaa.
Gaari Teendhada Roof Sare Teendhada
The soo socda waa ku saabsan baabuur teendho saqafka kor teendho la xiriira, Aniga rajo ku I caawi adiga ka fiican fahmay baabuur teendho saqafka kor teendho.
The soo socda waa ku saabsan saqafka sanduuq la xiriira, Aniga rajo ku I caawi adiga ka fiican fahmay saqafka sanduuq.
Gaari nabar waa ma aha kaliya a qurxinta shaqo, laakiin sidoo kale a amniga qalab taasi nuugista iyo yareya dibedda saameyn, ilaaliyaa ah jirka iyo ilaaliyaa ah jirka iyo deggeneyaasha.If adiga raba ku ogaada inbadan baabuur nabar la xiriira alaabooyinka, adiga karaa xiriir anaga si kuos ah. Anaga karaa siin adiga leh inbadan baabuur nabar la xiriira macluumaad macluumaad diray ku adigar emayl.
Lagu Sameeyay Gaari Tuulo Qaybaha gudaha Chgudahaa Xiangfu warshad - soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Soo dhawow ku our warshad iibso sare tayo leh iyo hooseeya qiimo Gaari Tuulo Qaybaha. Anaga doonaa siin adiga leh xigasho iyo bilaash ah tusaalaha.